သင်္ကြန် ရေပက်ခံ ကားငှားရမ်းခ တွေ မြင့်တက် - APANNPYAY
Home / သင်္ကြန်သတင်းများ / သင်္ကြန် ရေပက်ခံ ကားငှားရမ်းခ တွေ မြင့်တက်
သင်္ကြန် ရေပက်ခံ ကားငှားရမ်းခ တွေ မြင့်တက်
Apann Pyay 5:37 AM သင်္ကြန်သတင်းများ Edit
အရည်ကျိုအပ်နှံတဲ့ ကား အရေအတွက်များပြားလာပြီး ကားဟောင်းရှားပါးသွားတာကြောင့် လိုက်ထရပ်၊ ဟိုက်ဂျက်လို ကားတွေကိုသာ အဓိက ငှားရမ်းဖို့ စီစဉ်ထားတယ်။
ကားဟောင်းတွေ ရှားပါးသွားတာကြောင့် ရန်ကုန်သင်္ကြန်အတွက် ကားငှားရမ်းခ တွေ မြင့်တက်နေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ယမန်နှစ်နဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ယခုနှစ်လာရောက်ငှားရမ်းသူ အရေအတွက် ဟာ ဧပြီ ၅ ရက်အထိ နည်းပါးနေသေးကြောင်း ကား အငှားလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူတွေက ပြောကြားထားတယ်လို့ 7Day Daily ရဲ့ သတင်းတစ်ရပ်မှာ ရေးသားထားပါတယ်။
ယခုနှစ်အတွက် အရည်ကျိုအပ်နှံတဲ့ ကား အရေအတွက် များပြားလာပြီး ကားဟောင်းရှားပါးသွားတာကြောင့် လိုက်ထရပ်၊ ဟိုက်ဂျက်လို ကားတွေကိုသာ အဓိက ငှားရမ်းဖို့ စီစဉ်ထားကြောင်း Royal ကားအငှားလုပ်ငန်း မန်နေဂျာ မဝင်းမြတ်ကပြောကြားထားကြောင်း သတင်းမှာ ဖော်ပြပါတယ် ။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်က လိုက်ထရပ်တစ်စီးကို တစ်ရက် ငှားရမ်းခနှုန်းထားအဖြစ် ကျပ် ၁၆၀,၀၀၀ အထိ ရရှိပေမယ့် ယခုနှစ်မှာတော့ ၁၈၀,၀၀၀ အထိ ဈေးတင် ငှားရမ်းရမယ့် အခြေအနေရှိနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ သင်္ကြန် ကားငှားရမ်းသူတွေဟာ သင်္ကြန်ကာလနီးကပ်မှသာ လာရောက်ငှားရမ်းမယ့်အခြေအနေရှိကြောင်း မြတ်သဒ္ဒါ ကားအငှားလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်ဦးအောင်ဝင်းကလည်း ပြောကြားထားပါတယ်။
(သင်စိတ်ဝင်စားနိုင်တဲ့ ဆောင်းပါး – သင်္ကြန်တွင်းမှာ….ဘာလုပ်မလဲ ???)
သင်္ကြန် တွင်း အကြမ်းခံနိုင်ပြီး လူအမြောက်အမြားတင်နိုင်တဲ့ ဒိုင်နာလို ကားတွေဟာ အရည်ကျိုအပ်နှံတဲ့အထဲ ပါဝင်မှုများပြားနေတာကြောင့် ကားအငှားလုပ်ငန်းတွေမှာ ကားရှားပါးမှုတွေ ကြုံတွေ့နေရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
‘‘ကားတွေက အခုသွင်းလာတဲ့ ဂျပန်ကားအသစ်တွေများတယ်၊ ဂီယာဘောက်စ်ထဲရေတွေဘာတွေဝင်သွားရင် ပြင်ရတာအရမ်းခက်တယ်၊ ဒါ့ကြောင့် တချို့ကလည်း သင်္ကြန်တွင်း အငှားမလိုက်ကြဘူး’ လို့ ဦးအောင်ဝင်းက ပြောကြားထားပါတယ်။အချို့ကားအငှားလုပ်ငန်းတွေက လက်ရှိမှာ သုံးခွ၊ ခရမ်း အစရှိတဲ့ မြို့နယ်တွေမှာ ယနေ့အထိ အသုံးပြုနေတဲ့ ဂျစ်ကားတွေကို သွားရောက်ချိတ်ဆက်ငှားရမ်းနေကြပြီး သင်္ကြန် ရေပက်ခံ လည်ပတ်မယ့်သူတွေကို တစ်ဆင့်ပြန်လည်ငှားရမ်းဖို့ စီစဉ်ထားတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။
ယခုနှစ် ရန်ကုန် သင်္ကြန် မှာ မဏ္ဍပ် အရေအတွက်လျော့ နည်းတာကြောင့် သင်္ကြန်ရေ ပက်ခံထွက်ဖို့ စိတ်ဝင်စားသူ အရေအတွက် လျော့နည်းလာကြောင်း ကားအငှားလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောကြားထားပါတယ်။
အရညျကြိုအပျနှံတဲ့ ကား အရအေတှကျမြားပွားလာပွီး ကားဟောငျးရှားပါးသှားတာကွောငျ့ လိုကျထရပျ၊ ဟိုကျဂကျြလို ကားတှကေိုသာ အဓိက ငှားရမျးဖို့ စီစဉျထားတယျ။
ကားဟောငျးတှေ ရှားပါးသှားတာကွောငျ့ ရနျကုနျသင်ျကွနျအတှကျ ကားငှားရမျးခ တှေ မွငျ့တကျနတေယျလို့ သိရပါတယျ။
ယမနျနှဈနဲ့ နှိုငျးယှဉျရငျ ယခုနှဈလာရောကျငှားရမျးသူ အရအေတှကျ ဟာ ဧပွီ ၅ ရကျအထိ နညျးပါးနသေေးကွောငျး ကား အငှားလုပျငနျးလုပျကိုငျသူတှကေ ပွောကွားထားတယျလို့ 7Day Daily ရဲ့ သတငျးတဈရပျမှာ ရေးသားထားပါတယျ။
ယခုနှဈအတှကျ အရညျကြိုအပျနှံတဲ့ ကား အရအေတှကျ မြားပွားလာပွီး ကားဟောငျးရှားပါးသှားတာကွောငျ့ လိုကျထရပျ၊ ဟိုကျဂကျြလို ကားတှကေိုသာ အဓိက ငှားရမျးဖို့ စီစဉျထားကွောငျး Royal ကားအငှားလုပျငနျး မနျနဂြော မဝငျးမွတျကပွောကွားထားကွောငျး သတငျးမှာ ဖျောပွပါတယျ ။ ပွီးခဲ့တဲ့နှဈက လိုကျထရပျတဈစီးကို တဈရကျ ငှားရမျးခနှုနျးထားအဖွဈ ကပျြ ၁၆၀,၀၀၀ အထိ ရရှိပမေယျ့ ယခုနှဈမှာတော့ ၁၈၀,၀၀၀ အထိ စြေးတငျ ငှားရမျးရမယျ့ အခွအေနရှေိနတော ဖွဈတယျလို့ သိရပါတယျ။ သင်ျကွနျ ကားငှားရမျးသူတှဟော သင်ျကွနျကာလနီးကပျမှသာ လာရောကျငှားရမျးမယျ့အခွအေနရှေိကွောငျး မွတျသဒ်ဒါ ကားအငှားလုပျငနျးပိုငျရှငျဦးအောငျဝငျးကလညျး ပွောကွားထားပါတယျ။
(သငျစိတျဝငျစားနိုငျတဲ့ ဆောငျးပါး – သင်ျကွနျတှငျးမှာ….ဘာလုပျမလဲ ???)
သင်ျကွနျ တှငျး အကွမျးခံနိုငျပွီး လူအမွောကျအမွားတငျနိုငျတဲ့ ဒိုငျနာလို ကားတှဟော အရညျကြိုအပျနှံတဲ့အထဲ ပါဝငျမှုမြားပွားနတောကွောငျ့ ကားအငှားလုပျငနျးတှမှော ကားရှားပါးမှုတှေ ကွုံတှနေ့ရေတာလညျး ဖွဈပါတယျ။
‘‘ကားတှကေ အခုသှငျးလာတဲ့ ဂပြနျကားအသဈတှမြေားတယျ၊ ဂီယာဘောကျဈထဲရတှေဘောတှဝေငျသှားရငျ ပွငျရတာအရမျးခကျတယျ၊ ဒါ့ကွောငျ့ တခြို့ကလညျး သင်ျကွနျတှငျး အငှားမလိုကျကွဘူး’ လို့ ဦးအောငျဝငျးက ပွောကွားထားပါတယျ။အခြို့ကားအငှားလုပျငနျးတှကေ လကျရှိမှာ သုံးခှ၊ ခရမျး အစရှိတဲ့ မွို့နယျတှမှော ယနအေ့ထိ အသုံးပွုနတေဲ့ ဂဈြကားတှကေို သှားရောကျခြိတျဆကျငှားရမျးနကွေပွီး သင်ျကွနျ ရပေကျခံ လညျပတျမယျ့သူတှကေို တဈဆငျ့ပွနျလညျငှားရမျးဖို့ စီစဉျထားတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။
ယခုနှဈ ရနျကုနျ သင်ျကွနျ မှာ မဏ်ဍပျ အရအေတှကျလြော့ နညျးတာကွောငျ့ သင်ျကွနျရေ ပကျခံထှကျဖို့ စိတျဝငျစားသူ အရအေတှကျ လြော့နညျးလာကွောငျး ကားအငှားလုပျငနျးရှငျတှကေ ပွောကွားထားပါတယျ။